चटपटे खाँदा होसियार – Jaljala Online
2019, September 16, Monday
चटपटे खाँदा होसियार
Posted on May 31, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
सानो बाबु न्याउरो अनुहार लगाएर आमाको काँधमा ढल्किरहेको थियो। हामी सामाखुसीको क्लिनिकमा बच्चाको डाक्टरको पालो कुरिरहेका थियौं। सानो बाबु र उनकी आमा पनि ५ नम्बरको ढोका अगाडि डाक्टरको पालो कुरिरहनु भएको थियो।
यो खबर प्रणय सिग्देलले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । एकैछिनमा डाक्टर आउनुभयो। उनीहरूको पालो आयो। उनीहरू लगत्तै मेरो पनि पालो आयो। आमा र म पनि भित्र गएर कुर्सीमा बस्यौं। सानो बाबुलाई पेट दुखेको रहेछ। डाक्टरले सोध्नुभयो, ‘के भयो सानो मान्छेलाई ? ’ बाबु केही बोलेन। आमाले भन्नुभयो, ‘डाक्टर साहेब स्कुलबाट फर्किंदा साथीहरूसँग मिलेर सधैं बाबुले पानी पुरी र चटपटे खाने रहेछ। अनि बेलाबेलामा यसरी पेट दुखेर रुन्छ।’
आमाको कुरा सुनेर डाक्टर साहेब मुसुक्क हाँस्नुभयो। बाबुको पेट छाम्नुभयो। सानो बाबु पेट दुखेर आँखाभरि आँसु पार्दै थियो। बाबुलाई डाक्टरले धेरै कुराहरू भनेर सम्झाउनु भयो। डाक्टरको कुरा सुनेर म त छक्कै परे। हामीले मीठो मानेर खाने सडकमा राखिएका खानेकुरा त खानै नहुने पो रहेछ। डाक्टरले सबै कुरा भनेपछि केही औषधि लेखिदिनुभयो। बाबु केही बोलेन। डाक्टरको कुरा मात्रै सुनेर टाउको हल्लाई रह्यो। आमाले पनि बाबुलाई धेरै सम्झाउनुभयो। जाँदाजाँदै बाबुले मलाई पनि पुलुक्क हेर्दै बाहिर निस्कियो।
अब जाँच गर्ने मेरो पालो आयो। सबै कुरा सुनेर बसिरहेको देखेर मलाई पनि डाक्टरले सोध्नुभयो, ‘तिमी पनि पेट दुखेर आएको हो ? पानी पुरी कतिको मीठो लाग्छ ? ’ मैले त कहिलेकाहीँ मात्र खान्थेँ। तर पनि टाउको हल्लाउँदै भने, ‘होइन। खाएको छैन।’ अनि आमाले भनिदिनुभयो, ‘यसलाई त छालाको एलर्जी भएर ल्याएको डाक्टर साब।’ मलाई हात र खुट्टामा चिलाएर घाउ भएको थियो। त्यो दिनदेखि मैले धेरै कुरा बुझेँ।
अचेल पानीपुरी र चटपटे खानेकुरा धेरै देखिन्छन्। चटपटेको ठेलामा स्कुले विद्यार्थीको भीड बढी हुन्छ। खुला ठाउँमा यसरी राखिएका खानेकुराहरू संक्रमणको दृष्टिले पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै हानिकारक छ। झन् कागजमा राखेर खाँदा त हाम्रो स्वास्थ्यमा कति हानि गरिरहेको हुन्छ। कागजमा हामीले खानेकुरा खाँदा लगभग कागजमा भएका सबै हानिकारक रसायन खाइरहेका हुन्छौं। खानेकुराले सबै कागजको मसीलाई सोसिसकेको हुन्छ। यसरी मीठो मानेर हामीले चटपट खाँदा हाम्रो स्वास्थ्य बिस्तारै बिग्रिदैँ गइरहेको हुन्छ। यस्तो कुरामा हामीले सधैं ध्यान दिनुपर्छ। पढ्ने समयमा हामी बिरामी भयौं भने विद्यालय जान पनि सकिँदैन। घरमा आमा बाबालाई पनि तनाव हुन्छ। पैसा पनि खर्च हुन्छ। हामी यस्ता साना कुरामा ध्यान दिँदैनौं। तर यसको असर निकै डरलाग्दो हुने गर्छ। कागजलाई सेतो बनाउन र सेतो कागजलाई पुनः प्रशोधन गरी रंगीन बनाएर पत्रिकाको रूपमा प्रयोग गर्दासम्म सयौं रासायनिक पदार्थहरू मिसाइएको हुन्छ। यो सबै पेटमा जाँदा नै हामी बिरामी पर्ने हो।
हाम्रो विद्यालय वरपरको ५० मिटरभन्दा नजिकको क्षेत्रमा चुरोट, खैनी, विभिन्न हानिकारक पदार्थ तथा स्वास्थ्यको लागि प्रतिकूल खानेकुराहरू बिक्री वितरण गर्र्न नपाइने व्यवस्था छ। तर विद्यालय नजिकै हामीले धेरै ठेलाहरू देख्ने गरेका छौं। जानीनजानी हामीले खुला ठाउँमा राखिएका खानेकुरा खाने र पत्रिकाको टुक्रामाथि राखेर खाने गरेका छौं। यस्तो बानी अबदेखि चटक्कै छोडौं। नत्र बिरामी भएर त्यही सानो बाबु गए जस्तै पेट दुखेर अस्पताल जानु पर्ला।
कक्षा : ८
बूढानीलकण्ठ स्कुल, काठमाडौं
के तपाईंको सास गन्हाउँछ ? त्यसोभए यसो गर्नुस
डा. प्रकाश बुढाथोकी । तपाईंसँग गफ गरिरहेको बेला कसैले मुन्टो बटार्छ भने सम्झनुस्, तपाईंको सास गन्हाएको पनि हुन सक्छ। अरूसँग हाँस्दा र बोल्दा नै सास गन्हाउन थाल्यो भने कोही पनि नजिकिन चाहँदैन। सास गन्हाउनु अस्वस्थताको संकेत हो। आफ्नो सास गन्हाएको थाहा नपाउनेहरू पनि छन्। त्यस्तै कतिपय आफ्नो सास गन्हाएको थाहा पाएर पनि चिन्ता नगर्नेहरू हुन्छन्। […]
के निन्द्रामा घुर्ने समस्या रोग हो ? जान्नुस
Posted on August 17, 2019 Author Jaljala Online
काठमाडौँ । हामीमध्ये धेरैको निन्द्रामा घुर्ने बानी हुन्छ । यो खबर अञ्जु तामाङले रातोपाटीमा लेखेकी छन् । वरपरकालाई घुर्ने बानीले समस्या भए पनि आफूले घुरेको भन्ने व्यक्ति आफैलाई थाहा हुन्न । निन्द्रामा घुर्ने बानी मोटोपना भएका र वृद्धवृद्धामा धेरै पाउँछौ । यसलाई धेरैले रोग भन्दा पनि सामान्य समस्याका रुपमा हेर्दै आइरहेका छन् । ‘मेरो निन्द्रामा […]
३० कटेपछि महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्ने ५ परीक्षण, जानी राखौ
Posted on May 24, 2019 Author Jaljala Online
जेठ १०, काठमाडौं । व्यस्त दिनचर्या, उमेरअनुसार शरीरमा हुने हर्मोन परिवर्तनका कारण महिलाको जीवन बढी जोखिममा हुन्छ। पुरुषभन्दा महिलामा हर्मोन बढी मात्रामा गडबड हुने भएकाले पुरुषको तुलनामा महिला विभिन्न रोगबाट प्रभावित हुने गरेका हुन्।त्यसैले हरेक महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ। उमेरसँगै हर्मोनमा परिवर्तन आउने हुँदा महिला बढी प्रताडी हुनेगर्छन्।त्यसैले ३० वर्ष उमेर पार […]
क्रिकेट रंगशालामा डोजर: के हो विवादको चुरो, के हुन्छ समाधानको उपाय ?
शनिबार तपाईंको दिन कति शुभ ? पढ्नुहोस आजको राशिफल
२०७६ भदौ ३० गते सोमबार तपाइको भाग्य कस्तो छ ? पढ्नुहोस
प्रदेश ५ मा घट्यो डरलाग्दो घटना
जलजला मिडिया प्राली, काठमाडौँ